ကျမ်းစာမှာ မေရှိယအကြောင်း ဘာတွေကြိုပြောထားသလဲ | ကျမ်းစာအဖြေများ | NWT
ကျမ်းစာမှာ မေရှိယအကြောင်း ဘာတွေကြိုပြောထားသလဲ
“အို ဘက်​သလီ​ဟင် ဧ​ဖရတ်​မြို့၊ . . . အစ္စရေး​နိုင်​ငံ​မှာ ငါ့​အတွက် အုပ်​စိုး​ရှင်​တစ်​ယောက် မင်း​ဆီ​က​နေ ပေါ်​ထွန်း​လာ​မယ်။”
‘ဟေ​ရုဒ်​မင်း​လက်​ထက်၊ ယုဒ​ပြည်၊ ဘက်​သလီ​ဟင်​မြို့​မှာ ယေရှု​ကို​မွေး​ဖွား​ပြီး​နောက် နက္ခတ်​ဗေ​ဒင်​ဆ​ရာ​တွေ​က အရှေ့​အရပ်​က​နေ ဂျေရု​ဆ​လင်​မြို့​ကို ရောက်​လာ​တယ်။’
“ကျွန်​တော့်​ဝတ်​လုံ​တွေ​ကို အပိုင်းပိုင်း ခွဲ​ယူ​ပြီး​အင်္ကျီ​ကို​လည်း မဲ​ချ​ယူ​ကြတယ်။”
“စစ်​သည်​တွေ​က ယေရှု​ကို သစ်​တိုင်​ပေါ်​မှာ သံ​နဲ့​ရိုက်​ပြီး​သွား​တဲ့​အခါ ဝတ်​လုံ​တွေ​ကို လေး​ပိုင်း​ပိုင်း​ပြီး . . . ယူ​လိုက်​တယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ အတွင်း​အင်္ကျီ​က ချုပ်​ရိုး​မပါ​ဘဲ အထက်​အောက် တစ်​ဆက်​တည်း ရက်​ထား​တဲ့​အထည် ဖြစ်​နေ​တယ်။ ဒါ​ကြောင့် သူတို့​က ‘ဒီ​တစ်​ထည်​ကို​တော့ မပိုင်း​တော့​ဘဲ မဲ​ချ​ပြီး ယူလိုက်​ရ​အောင်’ လို့ အချင်း​ချင်း​ပြော​တယ်။”
ယောဟန် ၁၉:၂၃၊ ၂၄
“ဘု​ရား ကာ​ကွယ်​ပေး​တဲ့​အတွက်​သူ့အရိုး​တစ်​ချောင်း​မှ မကျိုး​ဘူး။”
“ယေရှု အလှည့်​ရောက်​တဲ့​အခါ သေ​ဆုံး​နေ​ပြီဆို​တာ သိ​သွား​တဲ့​အတွက် ခြေ​ထောက် မချိုး​တော့​ဘူး။”
“ငါ​တို့​ရဲ့ အပြစ်​အတွက် သူထိုးဖောက်​ခံ​ခဲ့ရ​တယ်။”
“စစ်​သည်​တစ်​ယောက်​က ယေရှု​ရဲ့​နံ​ရိုး​နား​ကို လှံ​နဲ့​ထိုး​လိုက်​တဲ့​အခါ သွေး​နဲ့​ရေတွေ ချက်​ချင်း​ထွက်​လာတယ်။”
“သူတို့​က ကျွန်​တော့်​ကို လုပ်​ခ​အဖြစ် ငွေ​စ ၃၀ ပေး​တယ်။”
ဇာ​ခ​ရိ ၁၁:၁၂၊ ၁၃
“အဲဒီ​နောက် တမန်​တော် ၁၂ ယောက်​ထဲ​က ယုဒ​ရှ​ကာ​ရုတ်​က ပုရော​ဟိတ်​ကြီး​တွေ​ဆီ သွား​ပြီး ‘ယေရှု​ကို ခင်​ဗျား​တို့​လက်​ထဲ အပ်​မယ်​ဆို​ရင် ဘယ်​လောက်​ပေး​မလဲ’ လို့​မေး​တော့ သူတို့​က ငွေ​စ ၃၀ ပေး​မယ်​လို့ ကတိ​ပေး​တယ်။”
မဿဲ ၂၆:၁၄၊ ၁၅; ၂၇:၅
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ကျမ်းစာမှာ မေရှိယအကြောင်း ဘာတွေကြိုပြောထားသလဲ
nwt စာ. ၁၄-၁၅